Sida loo soo dhoofsadaan MOV in iMovie
IMovie waxaa si balaadhan looga barnaamijka loo isticmaalo sixiddiisa video files. Waxaa loo isticmaalaa by xirfadlayaasha iyo dadka caadiga ah ee doonaya in ay sameeyaan mashruuc gaar ah. Muuqaaladan ugu fiican ee barnaamijkan waa: fududahay in la isticmaalo iyo wax badan oo ka mid ah fursadaha. Waxaa wax laga xumaado, waxaa sidoo kale waxay leedahay cillado gaar ah. Tusaale ahaan, IMovie ma furi doonaa oo saxaa qaabab gaar ah. Ducooyinkii iyo files MOV waa aqlka IMovie.
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah qalabka ay u qoraan doonaa qaab MOV ah. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel kuwaas files ee IMovie ah, waa inaad marka hore iyaga loogu badalo. Haddii tani ay tahay isku day hore, laga yaabaa in ay kugu adkaato in aad u. Waxaa jira barnaamijyo badan oo internet-ka oo bixiya suurtogalnimada. Si kastaba ha ahaatee, ma dhan oo iyaga ka mid, waa wax ku ool ah. Qaar ka mid ah u bedeli karaan faylasha MOV galay qaabab kale in aqbalin IMovie sidoo. Sidoo kale, wax badan oo ka mid ah waa lacag la'aan. Tani caadi ahaan waxaa loola jeedaa in aan la horumariyo ee xirfadlayaasha. Marka ay dhamaato, waxaad la kulmi doonaa la file video in uu leeyahay tayo liita oo aan aad u wanaagsan. IMovie furi karaa, laakiin tayada aan la hagaajin karaa. Barnaamijyadan waxay aadan rabin in aad isticmaasho.
Xalka ee dhibaatadan waa Wondershare Video Converter Ultimate . Sida laga soo xigtay sahan dhowr ah, tani waa barnaamijka ugu caansan u sixiddiisa video files. Waa ay fududahay in la isticmaalo waana la awoodi karo. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay oo kaliya dhawr daqiiqadood si ay u soo bixi oo ku xidh. Xitaa dadka isticmaala yaa isku dayay markii ugu horeysay, ayaa sheegaya in Wondershare Video Converter Ultimate waa barnaamij aad u fiican. Sidoo kale, waa ka duwan ugu wanaagsan ee diinta files MOV. Wareejinta waa degdeg ah oo aad u fududahay in la isticmaalo. Muuqaaladan ugu fiican ee Wondershare Video Converter Ultimate waa:
Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo.
Waxa ay taageertaa dhammaan qaabab (oo ay ku jiraan MOV iyo mod in aan la taageeray by IMovie ah).
The files gediyay loo furi karo oo bilaa saxar galay IMovie ah.
Wareejinta waa 30 jeer ka dhakhsi badan ee ku saabsan barnaamijyada la midka ah.
Waa la heli karaa ee kombiyuutarada Mac sidoo.
Waxaa jira in badan oo sifooyinka kugu caawin karo samaynta file a video weyn.
Sida loo badalo files MOV in Wondershare Video Converter Ultimate iyo iyaga dajiyaan galay IMovie ah.
Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan files MOV in IMovie ah, waa in aad iyaga loogu badalo in Wondershare Video Converter Ultimate ah. Tani waa hawl fudud oo u baahan in u dhaxaysa 5 iyo 10 daqiiqo (taas oo ku xiran ah ee files aad rabto in aad soo dhoofsadaan). Si kastaba, oo dhan aad u baahan tahay inaad samayso waa in raac tallaabooyinkan fudud.
1. Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate ah. Xusuusnow in tani ma aha barnaamij lacag la'aan ah. Marka aad la sameeyo, waxaa la furo. Waxaad arki doontaa sida ay u soomi waa.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa Converter casri ah video in uu leeyahay wax badan si ay u bixiyaan. Waxa kale oo ay bixisaa tafatirka yar ee videos sida beddelo nooca ah, falinjeeerka video ah, iwm Waxa kale oo aad ku dari kartaa saamaynta iyo watermark si aad video la software ah.
2. Riix '' dar files '' ama jiitaa oo iyaga iska barnaamijka. Waxay isla markiiba waa la shubi doonaa. Wixii video kasta oo aad ku Furi lahayn, waxaad fursad u haysataa edit ah. Guji ku yaal haddii aad rabto in aad wax ka bedel video ah. Waxaad arki doontaa in ay jiraan dhawr fursadood oo waxtar leh. Sidoo kale, waxaad ku eegaan karo video si aad u ogaadaan karaa sida ay u fiirin doonaa sida dib markii tafatirka. Abuurka, biirtay iyo timmaha kaliya yihiin qaar ka mid ah fursadaha. User A bedelno dhalaalka, mugga, iyo duwan saturation waqti isku mid ah.
3. Guji arrow Qaabka Output badhanka iyo dooran Qaabka. Tan waxaa loo adeegsadaa in lagu doorto qaab faylka uu ku yeelan doono ka dib markii uu qaab beddelidda. Waa in aad doorato qaab ah in ay taageerto qalab aad u isticmaali doonaa. Kooxda A wanaagsan waa in ay jiraan wax badan oo qaabab kala duwan, si aad mid aad u baahan tahay ka heli karto. Dooro qaab AVI haddii aad rabto in aad qalinka in video in IMovie ah. Si kastaba ha ahaatee, IMovie taageertaa badan oo ah qaabab kale, si aad u nabdoonaataan iyaga dooran kartaa. Waxaad riix kartaa on tab Device haddii aad rabto in aad doorato qaab ah in loogu talagalay qalab kaliya hal. Intaa waxaa dheer, dhammaan qalabka caanka ah waxaa taageera.
4. Riix badhanka badalo gaadayeen on. Geedi socodka u baahan tahay oo kaliya dhowr daqiiqo. Ha ka dhexgelin nidaamka ama waxaad yeelan doontaa in ay mar kale sameeyo. Marka la sameeyo, waxaa lagugu soo wargalin doonaa. Xusuusnow in habkan dheer oo kaliya qofka hayn karaa haddii faylasha aad aad u weyn. Xaaladaha kuwa, waxay u billaaban kartaa si ka badan 30 daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay dhacdaa keliya haddii size of file ah oo ka weyn 1 GB.
5. Marka aad samaysay, IMovie furan iyo menu File-Import-Movies tagaan. Hel filim aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan oo dooran. Waxaa lagu shubi doonaa barnaamijka. Haddii aad ka booddo tallaabo, file noqon doonaa aqrin ama waxyeelo. Taas macnaheedu waxa weeye ma noqon doonto in aad awood u dhoofsadaan. Xaaladdan oo kale, ku celi dhammaan tallaabooyinka.
Marka aad furto file ah oo la gediyay MOV in IMovie, waxaad codsan kartaa saamaynta kala duwan oo ka bedel. Marka aad samaysay, oo aad u badbaadin karaa. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel ku computer kale, waa in aad iyaga ku badbaadin sida mashruuc taalo, iyaga wareejiyo ah flash drive saari karo ka dibna ku Furro Korkooda computer kale Mac. Xusuusnow in files aan la furi karo ee PC ah. Waa qaab waxtar leh in xirfadlayaasha maalin walba isticmaasho. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u wada shaqeeyaan, saaxiibadaa mashruuca isku mid ah.
Waa in aad xaqiiqsato in file MOV ah ma aha codec ah, waa weel. Taas macnaheedu waxa weeye in la soo gelin karo IMovie ah, laakiin waa in aan la saxar karo. Tusaale ahaan, haddii file MOV ah ku jira DIVX, IMovie ma awoodi doonaan in ay wax ka bedel, sababtoo ah IMovie ma aha in uu taageeri. Dhinaca kale, waa in aad fiiro gaar ah u codecs audio iyo sidoo. Tusaale ahaan, AIFF iyo AAC aad u fiican yihiin iyo IMovie taageera dhibaato la'aan. Guud ahaan, marka aad soo dhoofsadaan file MOV ah oo wuxuu galay IMovie, oo dhani oo maqal ah in ay yihiin aqlka IMovie, waxaa lagu soo bandhigi doonaa cawlan. Files lagama saxar karo. Xalka kaliya ee waa in iyaga loogu badalo, oo markaas iyaga xaalkaa ku IMovie.
iMovie Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iMovie Files
5 talooyin iMovie 10 aad u baahan tahay in la ogaado
Sida loo soo dejinta VOB in iMovie?
Sidee Mozilla ee ku iMovie on Mac / iPad
iMovie VS pro cut final, taas oo mid ka mid ah adiga kuu wanaagsan
Top kale 5 iMovie lacag la'aan ah PC
> Resource > iMovie > Sida loo soo dhoofsadaan MOV in iMovie